Hosodoko: tanora manana vina i Fabrice T. | NewsMada
Hosodoko: tanora manana vina i Fabrice T.
Mpanakanto avy any Nosy Sainte-Marie i Fabrice Tsiassa, mpankafy sary sy hosodoko, hatramin’ny fahakeliny. Naniry ny hampitombo ny fahalalany sy ny fahaizany manao sary izy ka nazoto nampiana-tena, tamin’ny alalan’ny famakiana boky mikasika izany, tao amin’ny Alliance française ao Toamasina.
Nahitany vokany izany ary niantomboka tamin’ny fanaovana sary olona na “portrait” ny nahafantarana azy. Penisilihazo no nampiasainy, tany am-boalohany, avy eo, niova lokorano.
Amin’izao fotoana izao, manao hosodoko sady manao sary i Fabrice Tsiassa ary efa manana toeram-piasana manokana, hatramin’ny taona 2011.
Any amin’ny toeram-pisakafoana sy trano fandraisam-bahiny, ao Toamasina, no ahitana ny ankamaroan’ny sanganasany. Na eo aza izany dingana lehibe efa vitan’ity mpanakanto ity izany, mbola manana vina goavana izy. Nofinofiny ny ho matihanina amin’ity zavakanto ity sy ny hanana toeram-piasana lehibe kokoa, ahafahany mizara ny traikefany sy ny fahaizany ary miara-miasa amin’ireo tanora manan-talenta. Maniry ny hanangana toeram-pampirantiana na “galerie” ihany koa i Fabrice Tsiassa.
Manoloana izany fahavononany izany, nahazo vatsy avy amin’ny rafitra antsoina hoe ANT Mobility, atsy Johannesburg, ity mpanakanto ity ka nahafahany nanatontosa « résidence artistique » na fijanonana amin’ny toerana iray, mamoaka aingam-panahy. Notanterahiny ao amin’ny Is’Art galerie etsy Ampasanimalo izany. Taorian’io, manomboka androany hatramin’ny 20 septambra izao, hampiranty ny zava-bitany tao i Fabrice Tsiassa. « Modernité et mensonge » ny lohatenin’ny ranty, anasana ny mpankafy hosodoko sy sary.